1. Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin’i Kristy Jesosy mbamin’ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy:
2. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
3. Misaotra an’Andriamanitro aho isaky ny mahatsiaro anareo
4. Amin' ny fivavahako mandrakariva ho anareo rehetra, ka mangataka amin’ny fifaliana,
5. "Noho ny fifikiranareo amin' ny filazantsara hatramin’ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny;"
6. "Ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavin’ny andron’i Jesosy Kristy;"
7. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mby ato am-poko ianareo, fa mpiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin’ny fifatorako, na amin’ny famaliako hahafatsiny ny filazantsara hahamafy orina azy.
8. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrindra aho amin’ny fitiavan’i Jesosy Kristy.
9. Ary izao no angatahiko, dia ny mbola hitomboan’ny fitiavanareo bebe kokoa amin’ny fahalalana sy ny rariny rehetra,
10. Mba hankasitrahanareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po, ary tsy hanan-tsiny ho amin’ny andron’i Kristy ianareo,
11. Sady feno ny vokatry ny fahamarinana, izay avy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an’Andriamanitra.
12. "Ary tiako ho fantatrareo, ry rahalahy, fa izay zavatra nanjo ahy dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa;"
13. "Ka ny fifatorako ao amin’i Kristy dia fantatra ao amin’ny lapan’andriana rehetra, sy any amin’ny toeran-kafa rehetra;"
14. Ary ny ankabeazan’ny rahalahy ao amin’ny Tompo dia efa matoky noho ny fifatorako ka mihasahy kokoa hitory ny teny tsy amin’ny tahotra.
15. "Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute; mais d`autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes."
15. "Fialonana sy fifandirana aza no itorian’ny sasany an’i Kristy; ary ny sasany an-tsitrapo tokoa;"
16. "Ny sasany mitory an’i Kristy amin’ny fifandirana, fa tsy amin’ny fahatsorana, ka mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako;"
17. Fa amin’ny fitiavana ny an’ny sasany, satria fantany fa voatendry ho mpiaro ny filazantsara aho.
18. "Ahoana àry no izy? Fa amin’ny atao rehetra, na amin’ny fihatsarambelatsihy, na amin’ny marina, dia Kristy no torina, ary mifaly amin’izany aho; eny, mbola hifaly ihany aho."
19. Fa fantatro fa ho tonga famonjena ho ahy izany noho ny fivavahanareo sy ny fanomezan’ny Fanahin’i Jesosy Kristy,
20. "selon ma ferme attente et mon espérance que je n`aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort;"
20. Araka ny hafatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy hahazo henatra aho, na amin’inona na amin’inona, fa amin’ny fahasahiana rehetra, toy izay mpiseho mandrakariva, dia ankehitriny koa no hanehoana an’i Kristy ao amin’ny tenako, na amin’ny fiainana, na amin’ny fahafatesana.
21. "Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony;"
22. "Kanefa raha ny ho velona amin’ny nofo no hahavokaran’ny asako, dia tsy hitako izay hofidiko;"
23. "Je suis pressé des deux côtés: j`ai le désir de m`en aller et d`être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur;"
23. "Fa sanganehana eo anelanelan’izy roroa aho, maniry hiala ka ho ao amin’i Kristy, satria tsara lavitra izany;"
24. Kanefa kosa ny hitoetra eo amin’ny nofo no mahasoa anareo kokoa.
25. Ary satria matoky izany aho, dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho hahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin’ny finoana,
26. Mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo ao amin’i Jesosy Kristy amin’ny hankanesako aty aminareo indray.
27. "Fa hany ataoko: aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsaran’i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka hahita anareo, na tsy ho tonga, fa maharitra amin’ny fanahy iray ianareo, miray saina hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara;"
28. "sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut;"
28. "Ka tsy ho azon’ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin’inona na amin’inona; fa amin’ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin’Andriamanitra."
29. Fa efa nomena anareo noho ny amin’i Kristy, tsy ny hino Azy ihany, fa ny hiari-pahoriana koa noho ny Aminy.
30. Dia manana izany ady izany ianareo, izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny.